‘I am killing my wife right now,’ man reports to police operator | မျိုးမြန်မာ
‘I am killing my wife right now,’ man reports to police operator
Posted by myomyanmar on June 8, 2014
Posted in: သတင်း.	Tagged: killing, Wife.	Leaveacomment
“သားယောက်ျားမမွေးပဲ မိန်းကလေးနှစ်ယောက်သာ မွေးသည့်အတွက် ယောက်ျားဖြစ်သူမှ မိန်းမဖြစ်သူကို သတ်ပစ်ခြင်းသည် ဟာလာလ် ဖြစ်သလား(အစ္စလမ္မစ် ရှာရီယာ ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုသလား)?”
အထက်ပါမေးခွန်းသည် တူရကီနိုင်ငံ၊ တရားရုံးတစ်ခု၌ ဇွန် ၄ နေ့က “မိန်းကလေးတစ်ယောက် ထပ်မံမွေးဖွားသည့်အတွက် ယောက်ျားဖြစ်သူမှ မိန်းမဖြစ်သူအား သတ်ပစ်သည့်အမှု” ကို ကြားနားနေစဉ် တရားလိုမိသားစု၏ ရှေ့နေ ဘိုရတ်ဂွန်ကူ ဆိုသူက တရားရုံးတော်ကို မေးမြန်းသော မေးခွန်းဖြစ်သည်။
တူရကီနိုင်ငံ အရှေ့တောင်ပိုင်း၊ ဒီယာဘာကီယာပြည်နယ်သား အမျိုးသားတစ်ဦးမှ ၎င်း၏အမျိုးသမီးမှ မွေးဖွားသော ဒုတိယရင်သွေးမှာ မိန်းကလေးဖြစ်နေ၍ ၎င်းမှ ၎င်း၏အမျိုးသမီးကို သတ်ပစ်ခဲ့ကြောင်း ရဲကိုဖုန်းဆက်၍ အကြောင်းကြားခဲ့သည်။
အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ် V.T (အတိုကောက်အမည်) သည် ဇန်နဝါရီ ၂၅ နေ့က ၎င်း၏မိန်းမ အိပ်ပျော်နေစဉ် သူမအား လျှပ်စစ်ဝါယာကြိုးဖြင့် လျှော့တိုက်ကာ သတ်ပစ်ခဲ့သည်။ အသက် ၃၃ နှစ်အရွယ် M.T (အတိုကောက်အမည်) သည် အသတ်မခံရမီ အရင်ရက်ကမှ သူမ၏ ဒုတိယကိုယ်ဝန်အားမီးဖွားပြီး ဆေးရုံမှ ဆင်းလာခြင်းဖြစ်သည်။ မောပန်းစွာ အိပ်ပျော်နေသော သူမကို ယောက်ျားဖြစ်သူက လျှပ်စစ်ဝါယာကြိုးဖြင့် လျှော့တိုက်ကာ သတ်ပစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုယ်တိုင်ကမူ ဓာတ်မလိုက်စေရန် လက်အိပ်များ စွပ်ထားခဲ့သည်။
“ကျွန်တော် ကျွန်တော့်မိန်းမကို သတ်တယ်… ဒီလိုသတ်တယ်ဆိုတာက (မိန်းမက ယောက်ျားလေးမပါပဲ မိန်းကလေးတွေချည်း မွေးလို့) မိန်းမကိုသတ်ပစ်ဖို့ရန် ဟာလာလ်ဖြစ်လို့ (အစ္စလမ္မစ် ရှာရီယာဥပဒေအရ ခွင့်ပြုလို့) ပါ”
Two daughters, no sons, surely it is halal to kill her? “Burak Göncü, lawyer for the victim’s family, told the court on June4that the husband killed the woman ‘for giving birth toagirl once again’.”
A man in the southeastern province of Diyarbakır, Turkey, called police to inform them that he was murdering his wife, justaday after she gave birth to her second daughter, according to exchanges fromacourt hearing into the case on June 4.
“I swear that she has not died yet, but I am killing her if it is halal for me to kill her,” said V.T.
“I am telling you that I killed my wife; you are asking what the problem was,” said the suspect… >> Posted by Frau Katze at 3:00 PM |
ဟုတ်တယ် ကျွန်မတို့ မြန်မာလူမျိုးတွေက ယုတ်မာတယ်””” သို့အစ္စလာမ်များ →